Etu ị ga - esi mepụta ederede ịre ahịa Email ka nma n'iji Social Media | Martech Zone
Etu esi mepụta ederede ahia Email ka nma na iji Social Media
Saturday, January 25, 2020 Tọzdee, Nọvemba 12, 2020 Ronen Shnidman
Marketingre ahịa email abụrụla ụzọ ndị ahịa na-esi enweta ndị ahịa nwere ike ịbụ ebe ndị ahịa ahụ nabatara ebe niile na 1990s. Ọbụna site na ịmepụta usoro ọhụụ dịka mgbasa ozi mmekọrịta, mmetụta, na ịre ahịa ọdịnaya, a ka na-ele email anya dị ka ihe kachasị dị nnyocha e mere nke ndị ahịa 1,800 nke Smart Insights na GetResponse duziri.
Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na usoro ịre ahịa email kachasị agbanwebeghị na teknụzụ ọhụụ. Ekele maka mgbasa ozi mmekọrịta enwere ụzọ ị ga - esi melite ogo nke aha ahia email gị karịa naanị mkpokọta weebụsaịtị na ịzụta ndepụta ndị ọzọ.
N'okpuru ebe a bụ ụzọ ise ị nwere ike isi jiri mgbasa ozi mmekọrịta iji melite ogo nke ndepụta ndu email gị site na isi na usoro dị elu.
Mee ka ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi gị na-agafe na ọwa
Zọ kachasị mfe iji gbochie listi email gị na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ịgba ndị enyi gị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, ndị na-eso ụzọ na njikọta ume ka ha debanye aha ndepụta email gị. Onye a nwere ike iyi ihe doro anya, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị echegbu nsuso na itinye ndu ha gafee ọwa dị iche iche.
Echekwala na ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi gị bụ otu ndị ahụ dị ka ndị dị na listi email gị. Ọzọkwa, edela uru nke ndị enyi gị na mgbasa ozi mmekọrịta dịka enweghị ikike ịme ma ọ bụ metụta mkpebi ahịa. Na ahụmahụ m, ọ bụghịkwa eziokwu.
Mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eduga na ntinye aka na ibe weebụ gị. Ọ ga-eju gị anya na ogo ole ị ga - eduga ị nwere ike ịdebanye aha site na saịtị dịka Twitter, Facebook na LinkedIn ma ọ bụrụ na ị na - eme ndị ọrụ mmekọrịta mmekọrịta oge niile na mkparịta ụka dị oke ọnụ na ọdịnaya agbakwunyere bara uru. Dị nnọọ ka ọ dị mkpa, ọ bụrụ na ndị a na-esokarị gị na mgbasa ozi mmekọrịta ha ga-emepe ma gụọ ozi ịntanetị gị.
Kpughee Anya Na-ezoro Ezo Na Facebook
Na soshal midia, listi email gị ugbu a anaghị ejikọ gị naanị ndị a kapịrị ọnụ. Ọ na - emepe ọdọ mmiri buru ibu nke ikike ndị yiri ya na - eji Facebook Omenala na-ege ntị atụmatụ.
Iji njirimara ahụ dị mfe. Ihe ị ga - eme bụ ibudata ma ọ bụ idetuo na mado aha email gị na - eduga na ntanetị. Mgbe ahụ mee ka ndị na-ege gị ntị belata site na njirimara tozuru etozu, dị ka afọ na ọdịmma, ma gwa Facebook ka ịchọta ndị na-ege ntị.
Facebook ga - agagharị na nchekwa data ya iji chọta ndị nwere njirimara yiri nke ndị debanyere aha email gị ugbu a. Mepụta mgbasa ozi ezubere iche nke ga-eme ka ndị otu na-ege gị ntị kwenye pịa ma gaa na peeji nke ọdịda na saịtị gị dịka nke gara aga.
Jiri Social Media Iji Chọta Adreesị Email
I nwekwara ike iji aka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji chọta adreesị ozi-e ọrụ nke ndị na-eduga site na iji usoro dị mfe, ma dị obere karịa, nke a na-akpọ mgbakwunye data.
Data na-agbakwunye maka ịzụ ahịa na-eji ọrụ ndị ọzọ emejupụta oghere (dịka aha ọrụ ma ọ bụ adreesị ozi-e ọrụ) maka ozi ịkpọtụrụ gị. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na mpaghara a, gụnyere Sellhack, Clearbit na Pipl (ebe m na-arụ ọrụ).
Dịka ọmụmaatụ, na Pipl's Search, ndị ọrụ nwere ike bulite ndepụta nwere aha ndị na-eduga na njikwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya wee budata ndepụta ahụ na adreesị email efu na-agbakwunye na ya.
Enwere ike iji ọrụ mgbakwunye data ndị a chọta adreesị ozi-e maka ndu ndị nwere ike ịchọta site na ịge ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Iji zere ịghọ onye spammerụ hụ na ị nyere nhọrọ ịpụ apụ doro anya mgbe ị na-agakwuru ndị a.
Nyochaa Ndepụta Email Gị ma ọ bụ Na-enweghị Social Media
Ọ bụ ajọ njọ nke ire email na ọnụọgụ ụfọdụ nke ndị mmadụ ga-edebanye aha maka aha email gị site na iji adreesị ozi-e adịgboroja. Ọbụghị naanị na izipu adreesị ndị a na-egbu oge gị, mana ọtụtụ ozi ịntanetị ga-emesị duga ndị na-eweta ọrụ email gị iji kpọọ gị spambot na igbochi akaụntụ gị.
Nwere ike iji ọtụtụ ọnụ ahịa asọmpi ọrụ nkwenye email iji wepu ozi ịntanetị adịgboroja, gụnyere Agbanyela, Gbanwee, Nnukwu Email Validator, Onye nkwado email na Ogo ọkachamara data.
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ ga-eji akaụntụ email nkeonwe ma ọ bụ adreesị ha na-elele anya ugboro ugboro site n'aka ndị na-enye ọrụ dịka Gmail na Yahoo dejupụta ụdị kọntaktị. Nke a na-eme ka gị na ndị a na-ekwurịta okwu ma na-eduga karịa nke ukwuu.
Luckily, ọrụ dị ka Adreesị Ọhụrụ na Ihe ngosi Tower ga - enyere gị aka ịchọta adreesị ozi-e kachasị amasị ndị ahịa na ozi ịntanetị nwere ike ịzaghachi na-enye dabere na isi ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji njikwa mgbasa ozi mmekọrịta na adreesị ozi-e gara aga na API nke Ndị Pipl nwere API ịchọta adreesị ozi-e ọzọ na ọrụ. Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme nke oge-ederede na ndekọ email ga-enye gị echiche ma email na-eji ya na nke nwere ike ịnweta aha ọrụ yana ozi ọkachamara ndị ọzọ iji meziwanye ndu ahụ.
Igodo iji chọpụta nke n'ime ụdị ọrụ atọ a bụ ịtụle ọnụego ha, ọnụego egwuregwu yana etu teknụzụ ha si dabara na nhazi na ebumnuche usoro nhazi gị.
Easy Mpi Uru
Isi mbugharị bụ na ọ bara uru ịmepụta ihe na iji teknụzụ ọhụụ iji melite ogo nke ndepụta email gị na ọnụego mkparịta ụka ha. Nchọpụta ọzọ na nyocha 2015 Smart Insights bụ na ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ pere mpe (53%) nke ndị ahịa jiri ụzọ-gen na ndepụta ụlọ rụọ ọrụ iji melite ogo na ịdị irè nke ndu ha. Ole na ole ndị na-ere ahịa (ihe na-erughị 25%) na-eji usoro mmekọrịta ma ọ bụ ọdịnaya iji wulite ezigbo ndu. Nye onwe gị asọmpi uru. Iwere nzọụkwụ ahụ dị mfe.
Tags: Gbanweennukwu email validatorakaụntụ emailemail nkwenyenkwenye emailibuo data qualityadreesị ọhụrụpipldata pipl apielekọta mmadụ mediaụlọ elu data
Ronen Shnidman Saturday, January 25, 2020 Thursday, November 12, 2020
Ronen bụ ngwaahịa ọkwọrọikọ na Pipl, otu ụlọ ọrụ raara nye ka ọ dị mfe iji mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbasara ndị mmadụ. You nwere ike iso ya na akụkọ kachasị ọhụrụ na mmelite si Pipl na Twitter.
Tredị Onye Mmepụta Ngwa Ekwentị ọ bụla kwesịrị ịma maka 2020
Ebee Ka I Kwesịrị itinye Mgbalị Mgbasa Ozi Gị na 2020?
Apr 28, 2017 na 6: 53 AM
Hey, daalụ maka ịkekọrịta ozi bara uru banyere Email Marketing. Obi dị m ụtọ ịhụ blọọgụ gị ndị ọzọ gbasara ozi mgbakwunye email.